Imigaqo esisiseko yoKhuseleko lweKhitshi
Ukupheka kuyonwabisa, kodwa ukhuseleko ekhitshini yinto ephambili. Kukho izixhobo ezininzi kunye neengozi zokusingqongileyo ezinokuba yingozi kakhulu. Izinto ezibukhali njengeemela, vula umlilo nge-oveni, izixhobo zombane, kunye neebhaktiriya ezijikeleze ikhitshi. Ukugcina imigaqo esisiseko ye ukhuseleko ekhitshini ngumkhwa olungileyo wokuphuhlisa. Ngalo lonke ixesha nikela ingqalelo kwinto oyenzayo ekhitshini kuba isiliphu esinye sinokubangela ukonzakala kakhulu okanye iingozi. Ukuthintela ukwenzakala okukhulu okanye iingozi: soloko unikela ingqalelo kwinto oyenzayo, yenza isicwangciso sokucoceka ekhitshini, kwaye ube nezixhobo zokukhusela eziyimfuneko. Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba ngubani osemathunjini - umzekelo, abantwana akufuneki bashiywe bodwa ekhitshini!
Gcina iimela kwibloko eyenziwe ngomthi okanye kwidrowa. Qinisekisa ukuba iimela azifikeleleki ebantwaneni. Landela ezi zinto zilandelayo iingcebiso zokukhusela imela ukuthintela ukwenzakala.
I-meloxicam yinto elawulwayo
Ungaze upheke ngeengubo ezikhululekileyo kwaye ugcine iinwele ezinde zibotshiwe. Awufuni nantoni na ngengozi yokubamba umlilo (ungasathethi ke ngeenwele eziphela ekutyeni!).
Ungaze upheke ngelixa unxibe izacholo ezijingayo. Isacholo sinokujixeka ngokujikeleza izibambo.
Gcina abaxhasi kufutshane kwaye ubasebenzise! Lumka ungabashiyi kufutshane nedangatye elivulekileyo.
Jika izibambo zembiza kude ngaphambili kwesitovu. Abantwana abanakho ukubabamba, kwaye abantu abadala abanakho ukungqubeka kubo ukuba baphume endleleni.
Musa ukuvumela ukutya okujonga ubushushu kuhlale ekhitshini. Inyama eluhlaza, intlanzi, kunye neemveliso ezithile zobisi zinokonakala ngokukhawuleza, ngoko ke zifriji okanye uzifrize kwangoko.
Sula ukuchitheka ngokukhawuleza. Gcina umgangatho wome ukuze kungabikho namnye otyibilika aze awe.
Yahlula inyama ekrwada kunye neenkukhu kwezinye izinto nanini na uzisebenzisa okanye uzigcina. Olu lumkiso luthintela ukungcoliseka kwebacteria eyingozi ukusuka kokutya kuye kwenye.
Hlamba izandla zakho phambi kokuphatha ukutya nasemva kokuphatha inyama okanye iinkukhu. Izandla zingalololiwe othutha iimpahla ngokuchanekileyo.
Fumana isicima mlilo ekhitshini lakho. Esi sixhobo asinakwenza lukhulu kwiijubheri zakho zecherries, kodwa inokuthintela intlekele. Kuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukuze thintela umlilo ekhitshini , kodwa ngamanye amaxesha kuphuma ezandleni zakho. Ke, qiniseka ukuba uyayazi indlela yokusebenzisa isicima-mlilo ngaphambi kokuba kuvele umlilo. Awunakho ukuchitha naliphi na ixesha ufunda umkhombandlela phakathi kwamadangatye.
Ipilisi yeorenji r 127
indlela dm kwi-twitter
oonxantathu abanamacala amabini alinganayo
Ukuqala kunye neencopho
Olona lubulala zintsholongwane lusulelo lweentsini